Izilumkiso -Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
Amanyathelo okhuseleko ekusebenziseni imodyuli yeLCD
Nceda uqaphele oku kulandelayo xa usebenzisa ipaneli yeLCD
1. Umenzi unelungelo lokutshintsha
(1). Kwimeko yezinto ezingenakuphikiswa, umenzi unelungelo lokutshintsha izinto ezenziweyo, kubandakanya uhlengahlengiso lokukhanyisa ukukhanya. (I-Resistor, i-capacitor kunye nabanye abathengisi abahlukeneyo bezinto ezithile baya kuvelisa imbonakalo eyahlukileyo kunye nemibala)
(2). Umenzi unelungelo lokutshintsha i-PCB / FPC / isibane esingasemva / iPaneli yokuChukumisa ... inguqulelo phantsi kwezinto ezingenakuphikiswa (ukuze kuhlangatyezwane nonikezelo lonikezelo umenzi unelungelo lokutshintsha uguqulelo ngaphandle kokuchaphazela iimpawu zombane kunye nobukhulu bangaphandle. )
2. Amanyathelo okhuseleko
(1). Kufuneka usebenzise iimbombo ezine okanye amacala amane ukufaka imodyuli
(2). Ubume bofakelo kufuneka buthathelwe ingqalelo ukuze ungasebenzisi amandla angalinganiyo (njengokujija uxinzelelo) kwimodyuli. Imeko yofakelo lwemodyuli kufuneka ibenamandla ngokwaneleyo ukuze imikhosi yangaphandle ingahambisi ngqo kwimodyuli.
(3). Nceda unamathele ipleyiti yokukhusela ebonakalayo ukukhusela ipolarizer. Ipleyiti yokukhusela esekuhleni kufuneka ibe namandla ngokwaneleyo okumelana nemikhosi yangaphandle.
(4). Ulwakhiwo lwemitha kufuneka lwamkelwe ukuhlangabezana neenkcukacha zobushushu
(5). Uhlobo lwe-acetic acid kunye nezinto zohlobo lwechlorine ezisetyenziselwa imeko yokugubungela azichazwanga, kuba eyangaphambili ivelisa irhasi etshabalalisayo eyonakalisa ipolarizer kubushushu obuphezulu, kwaye eyokugqibela isekethe iyaqhekeka ngendlela yokuphendula ngombane.
(6). Sukusebenzisa iglasi, i-tweezers okanye nantoni na enzima kune-HB ipensile ekhokelela ekuchukumiseni, ekutyhaleni okanye ekusuleni ipolarizer ebonakalayo. Nceda ungasebenzisi funda ukucoca iimpahla ezinothuli. Musa ukubamba umphezulu wepolarizer ngezandla ezingenanto okanye ilaphu elinamafutha.
(7). Sula amathe okanye amathontsi amanzi ngokukhawuleza. Ziza kubangela ukuba deformation kunye nombala ukuba banxibelelana nepolarizer ixesha elide.
(8). Sukuvula ityala, kuba isekethe yangaphakathi ayinamandla ngokwaneleyo.
3. Amanyathelo okhuseleko
(1). Ingxolo yespike ibangela ukungasebenzi kwesekethe. Kuya kuba sezantsi kunombane ulandelayo: V = ± 200mV (overvoltage kunye undervoltage)
(2). Ixesha lokuphendula lixhomekeke kubushushu. (Kumaqondo obushushu asezantsi, iya kukhula inde.)
(3). Ukuqaqamba kuxhomekeke kubushushu. (Kumaqondo asezantsi asezantsi, iba sezantsi) kwaye kubushushu obusezantsi, ixesha lokuphendula (kuthatha ukukhanya ukuzinzisa emva kokutshintsha ixesha) kuba lide.
(4) Kulumkele ukufukuka xa iqondo lobushushu litshintsha ngesiquphe. Ukuxinana kungonakalisa ipolarizer okanye abafowunelwa ngombane. Emva kokuphela, ukugcoba okanye amabala kuya kwenzeka.
(5). Xa ipateni esisigxina iboniswa ixesha elide, umfanekiso oshiyekileyo unokuvela.
(6). Imodyuli ineesekethe eziphezulu. Umvelisi wenkqubo uya kucinezela ngokufanelekileyo ukuphazamiseka kombane. Iziseko zendlela kunye nokukhusela zinokusetyenziselwa ukunciphisa ukuphazamiseka kunokuba kubalulekile.
4. Ulawulo lokukhutshwa kombane
Imodyuli yenziwe ngeesekethe ze-elektroniki, kunye nokukhutshelwa ngombane kunokubangela umonakalo. Umqhubi kufuneka anxibe isongo se-electrostatic kwaye asincothule. Ungayichukumisi ngqo izikhonkwane kwi-interface.
5. Amanyathelo othintelo ngokuchasene nokukhanya okuqinileyo
Ukukhanya okuqinileyo kuya kubangela ukonakala kweepolarizers kunye neefilitha zemibala.
6. Ukuqwalaselwa kokugcina
Xa iimodyuli zigcinwa njengezinto zokugcina ixesha elide, kufuneka kuthathwe la manyathelo alandelayo
(1). Zigcine kwindawo emnyama. Sukuyivelisa imodyuli elangeni okanye kwizibane ezibengezelayo. Gcina ama-5 ukuya kuma-35 ℃ phantsi kobushushu obuqhelekileyo bokufuma.
(2). Umphezulu wepolarizer akufuneki unxibelelane nezinye izinto. Kuyacetyiswa ukuba uzipakishe xa uhambisa.
7. Amanyathelo okhuseleko ekuphatheni ifilimu yokhuselo
(1). Xa ifilimu ekhuselayo ikrazukile, kuya kubakho umbane ongashukumiyo phakathi kwefilimu kunye nepolarizer. Oku kufuneka kwenziwe ngombane osisiseko kunye nezixhobo zokuvuthela i-ion okanye loo mntu ucofe kancinci kwaye ngononophelo.
(2). Ifilimu ekhuselayo iya kuba nenani elincinci leglu eliqhotyoshelwe kwipolarizer. Kulula ukuhlala kwipolarizer. Nceda ukhuphe ifilimu ekhuselayo ngononophelo, musa ilaphu elikhanyayo.
(3). Xa imodyuli enefilimu ekhuselayo igcinwe ixesha elide, emva kokuba ifilimu ekhuselayo ikhutshiwe, ngamanye amaxesha kusekho isixa esincinci kakhulu seglu kwipolarizer.
8. Eminye imiba efuna ingqalelo
(1). Kulumkele ukufaka impembelelo enkulu kwimodyuli okanye ukwenza naluphi na utshintsho okanye uguquko kwimodyuli
(2). Sukushiya imingxunya eyongezelelweyo kwibhodi yesekethe eprintiweyo, lungisa imilo yayo okanye ubeke endaweni yeenxalenye zemodyuli yeTFT
(3) Sukuyidibanisa imodyuli yeTFT
(4). Ungadluli kwinqanaba eliphezulu ngexesha lokusebenza
(5). Musa ukulahla, ukugoba okanye ukujija imodyuli yeTFT
(6). I-Soldering: Isiphelo se-I / O kuphela
(7). Ukugcina: Nceda ugcine kwindawo yokupakisha ye-anti-static container kunye nendawo ecocekileyo
(8). Yazisa umthengi: nceda unake umthengi xa usebenzisa imodyuli, sukubeka nayiphi na itheyiphu kumacandelo emodyuli. Kuba iteyiphu ingasuswa iya kutshabalalisa ubume bokusebenza kwamalungu kwaye ibangele ukungaqheleki kombane kwimodyuli.
Ukuba umatshini uthintelwe kwaye akunakuphepheka ukunamathela kumatshini, kukho ezi ndlela zilandelayo zokuthintela le meko ingaqhelekanga:
(8-1) Amandla okuncamathela kwiteyiphu yesicelo akufuneki abe mkhulu kunamandla okubambelela kwi-3M-600] tape;
(8-2) Emva kokufaka iteyiphu, akufuneki kubekho msebenzi wokucola;
(8-3) Xa kufuneka kutyhilwe iteyiphu, kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe indlela yokufudumeza ukufumanisa iteyiphu.